ခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးမျိုး - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ရှိသလိုပဲ ရောဂါဝေဒနာတွေလည်း ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး မျိုးစုံရှိပါတယ်။ ဒီလိုပဲ လူတိုင်းဖြစ်ဖူးတဲ့ ခေါင်းကိုက်တာမှာလည်း ပုံစံကွဲတွေ အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့။
✔ဘယ်လို အမျိုးအစားခွဲမလဲ ??
(၁)အကြောင်းပြချက် ရှာလို့မရဘဲ ကိုက်တဲ့ Primary Headache နဲ့
(၂)ရောဂါအခံတစ်ခုခုကြောင့် ကိုက်တဲ့ Secondary Headache လို့ ခွဲလို့ရပါတယ်။
✔အဖြစ်များတဲ့ နာမည်ကြီး ခေါင်းကိုက်ရောဂါတွေက ??
ခေါင်းပတ်ပတ်လည်မှာ ကြိုးနဲ့တင်းကျပ်နေအောင် စည်းခံထားရသလို ဆွဲညှစ်ခံထားရသလို ကိုက်နေတတ်ပါတယ်။
ခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေးတွေ သောက်တာအပြင် စိတ်ဖိစီးမှု လျှော့ချရပါမယ်။
ဓမ္မတာမလာခင် စကိုက်တတ်ပြီး နေပူမိရင် မိုးမိရင်လည်း ကိုက်တတ်ပါတယ်။
ရက်အတော်ကြာကြာ ကိုက်တတ်ပြီး ဘာမှမလုပ်နိုင်လောက်အောင် ကိုက်တတ်ပါတယ်။
အလင်းစူးစူးမကြည့်နိုင်တာမျိုးတွေ တွဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ရုတ်တရက် မျက်လုံးတစ်ဖက်က စကိုက်လာမယ် မျက်ရည်တွေကျမယ်.. နှာရည်တွေကျမယ်။ မျက်ခွံတွေပါရောင်လာပြီး စူးစူးရှရှကိုက်တတ်တယ်။ ညဘက်ပိုဖြစ်တတ်တယ်။ တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ်ကနေ ရှစ်ကြိမ်လောက်အထိ.. တစ်ခါကိုက်ရင် ၁၅မိနစ်ကနေ နှစ်နာရီခွဲလောက်ကြာတတ်ပါတယ်။ ကိုက်လိုက် ပျောက်လိုက် ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ၄ ပါတ်ကနေ ၁၂ ပါတ်လောက်အထိဆက်တိုက် ကိုက်နေတတ်ပြီး လတော်တော်ကြာကြာကနေ နှစ်နဲ့ချီပျောက်နေတတ်တယ်။
ယောက်ျားလေးတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပြီး ဆေးလိပ်သောက်ရင် ပိုဖြစ်ပါတယ်။
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ အသောက်များလို့ ဆေးကြောင့် ပြန်ခေါင်းကိုက်တဲ့ ရောဂါပါ။ ဆေးတွေ ပြန်ဖြတ်လိုက်ရင် ကောင်းသွားတတ်ပါတယ်။
▪ Sinus Headache
ထိပ်ကပ်နာဆိုတဲ့ နာတာရှည် နှာခေါင်းအတွင်းပိုင်း ရောင်ရမ်းတဲ့ရောဂါရှိနေရင်လည်း မျက်ရိုးနဲ့ ခေါင်းအရမ်းကိုက်နေတတ်ပါတယ်။ နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းဆရာဝန်နဲ့ ပြဖို့ိုလိုပါလိမ့်မယ်။
✔တခြားခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးကွဲတွေ ကိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဘာကြောင့်ပဲ ခေါင်းကိုက်ကိုက် ပုံမှန်ကိုက်နေကျထက် ထူးထူးခြားခြား ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကိုက်လာမယ် တခြားပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုခုပါတွဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်မြန်မြန်ပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ တော်ရုံကိုက်တာလောက်ကတော့ ပါရာစီတမောလ်ထက်ပိုပြီး ဘာမှမသောက်ပါနဲ့။